Nilaza i Microsoft fa sarotra loatra ny Android | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | About us, hafa
Ny filoha lefitry ny fifandraisan-davitra an'i Microsoft Corporate Frank X. Shaw dia nilaza tao amin'ny bilaogy ofisialin'i Microsoft:
Saingy araka ny fantatry ny tompona Android, sarotra io sehatra io raha tsy manampy hoditra hafa naorina manodidina ny fanoharana hafa
Iza no fandikan-teny tsotra:
Saingy araka ny fantatry ny mpampiasa Android, sarotra ity sehatra ity raha tsy manampy hoditra hafa naorina manodidina ny fanoharana hafa.
Manontany tena aho hoe: Tena sarotra sa sarotra ny Android? ...
Manontany tena ny maro, inona izany izao? Ny tiana hambara dia ny fanombohan'ny Facebook fampiharana ho an'ny Android antsoina hoe Facebook Home, izay raha ny fahitako azy dia ny 'Facebook Phone' izay nandrasan'ny maro volana vitsivitsy lasa izay, dia nilaza i Microsoft fa "kopia" ity fampiharana ity. Windows Phone 7.5 (nanomboka tamin'ny 2 taona lasa).
Saingy miverina amin'ny teboka Mihevitra ve ianao fa sarotra ny Android?
Na dia izay manoratra anao aza tsy dia tsara vintana manana fitaovana Android, dia efa namaky zavatra betsaka momba an'io aho ary nanana fitaovana maro miaraka amin'ity rafitra ity eo am-pelatanako hizaha toetra azy tsara, na takelaka na finday avo lenta. Izaho manokana dia hitako fa intuitive ilay rafitra, tsy misy na kely na kely (tsy tanteraka) hialonana an'i iOS, ary raha ampiarahintsika amin'izany ny safidy fanamboarana rehetra (ampidirina ao amin'ny OS na ampian'ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo) ... tsara, angamba ny fanovana ny adjectif izay ampiasain'i Shaw "sarotra" ho an'ny teny mifanaraka kokoa toa ny "malefaka".
Ny olana (araka ny inoako) dia ny ahiahin'i Microsoft ny hahavery ny tsena izay ananan'i Windows Phone, satria tsy miafina izany raha ny amin'ny fivarotana elektronika (manokana ireo solosaina samihafa izay manana na hanana ny OS ho an'ny finday) Windows Phone dia tsy nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny tsena, ary mbola bebe kokoa ... Android dia mitohy ho mpitarika amin'ny lafiny maro, raha ny marina dia heverinay eto ny OpenSource 2011. Mariho fa nanomboka ny taona 2011 ka hatramin'ny fahazoana Android dia nahazo tany marobe na dia tamin'ny tsena hafa aza finday finday, na noho ny 'firaisana' an'ny Ubuntu-Android, ho an'ny tetikasa Laptop iray isaky ny zazaary koa ny Mini-TV Box (ankoatry ny hafa).
Izany rehetra izany dia mitarika antsika hanontany tena amin'ny zavatra iray izay mety ho fanamafisana ny mihoatra ny fanontaniana iray, Android ve no ho robot kely handresy ny adintsika?
Na izany na tsy izany, mbola betsaka ny lamba hokapaina ary izany indrindra no antony nametrahako azy teo, fantatro fa maro aminareo no afaka hanome hevitra mihoatra ny fahefana momba an'io raharaha io 😉
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Nilaza i Microsoft fa sarotra loatra ny Android
Ermimetal dia hoy izy:
Tsara kokoa ny mandresy ny ady amin'ny "Big Versions of Linux" fa ny tena marina dia mitondra tsara ny faneva Linux i android, satria maro ny olona te hamporisika ny tenany hihaona amin'ireo Big Version ireo ary hahita ny tena tombony azo.
Customizable: hatrany am-boalohany tsy mila faka faka, toy ny amin'ny telefaona finday hafa.
Ary ny zavatra tena tsara amiko dia izy mandova zavatra izay nolovany tamin'ny zokiny lahy, dia ny fiarahamonina te-hanampy sy hampandroso. Izay malalako, tsy misy amin'ireo finday hafa. Ho ela velona i Android sy Linux
Mamaly an'i Ermimetal
Raha heverina fa ny telefaona ananako no Android voalohany amiko dia tsy nanandrana zavatra mora kokoa aho amin'izao fotoana izao. Na izany aza, raha dinihina ny fitoriana napetrak'i Microsoft hanohitra an'i Google noho ny toerana misy ny Android (araka ny vaovao, hatramin'ny 90% amin'ny faritra sasany), io karazana famantarana io dia takatra. Mampiseho fotsiny ny toe-javatra "mamoy fo" an'ny mpanamboatra namorona zavatra tsara (ny marina dia nanandrana ny WP aho ary tena mandaitra, raha ny marina dia aleoko io noho ny iOS), fa amin'ny farany dia tsy miainga.
Raha ny tokony ho izy, raha mbola tsy namaky azy io tamin'ny Internet ianao, ity ny vaovao, amin'ny antsipiriany kokoa: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/31/navegante/1301563635.html
Ny tena izy dia tsy manana latsa-kenatra akory izy ireo ao amin'ny MS, jereo ny miresaka momba ny toerana manjaka, ny ampihimamba ary ny fahasarotan'ny rafitra, izay tsy maintsy zakanao amin'izao andro izao ...
Raha mieritreritra ilay lehilahy fa "sarotra" ny Android, azo antoka fa tsy nampiasa tsara ny OS finday windows izy, dia intuitive kely maharikoriko io, ary tsy tiako maimaim-poana.
Ny marina dia, tsy mpankafy an'i Microsoft aho, saingy tsy miombon-kevitra aminao aho, ny reniko sy ny dadatoako dia manana an'i Nokias Lumnia miaraka amin'ny WP 7.8 sy 7.5 ary tiako ny OS, ny fisehoany ary ny fomba fiasa, I hijoro mamirapiratra ho an'ny telefaona takelaka, tsy haiko fa mbola tsy nokasihiko mihitsy. Ny manelingelina ahy dia ny crédit (fifandanjana) apetrany ao aminy dia tsy maharitra mihitsy satria mifandray amin'ny Internet foana ny telefaona satria manery anao hametraka ny kaonty mailakao hampidinana ny WhatsApp ary hampakatra avy hatrany ny fifandraisana ao amin'ny mandefa mailaka amin'ny fandaharam-potoana ary mampifandray anao amin'ny Facebook ary manavao hatrany ny vaovaon'ny fifandraisana; Tsy azonao atao ny mamafa na manafoana ny kaontin'ny telefaona satria tsy misy ny safidy dia tsy afaka mampiditra kaonty bebe kokoa fotsiny ianao. Tsy manana izany olana izany ny dadatoako satria manana drafitra angon-drakitra izy.
Raha fintinina dia tsy ratsy ny rafitra na ny fisehoany fa drafitra be dia be miaraka amin'ny fahaiza-manao amin'ilay nolazaiko tamin'ny reniko mba hividy finday iray hafa amin'i Androi izay tsy manosotra anao toa ny Windows Phone, manana ny rahalahiko Samsung miaraka amin'ny Android Ary tsy nitaraina momba an'io izy raha ny marina fa tiany io.
PS Miala tsiny amin'ny tsipelina diso sy ny fanamarihana raha misy.
GGGG1234 dia hoy izy:
«Ary raha manelingelina ahy izany dia ny crédit (fifandanjana) apetrany ao aminy dia tsy maharitra na inona na inona satria mifandray amin'ny Internet foana ny telefaona satria manery anao hametraka ny kaonty mailakao hampidinana ny WhatsApp ary avy hatrany dia miampanga ny fifandraisanao manomboka amin'ny mailaka ka hatramin'ny telefaona »
Android, manao izany koa ...
Valiny amin'ny GGGG1234
Izaho manokana dia nampiasa Android 2.2, 2.3, ary kinova 4 maro ary zavatra hafa, mpampiasa efa mandroso aho, an'ny android, ary andro vitsivitsy lasa izay dia nividy lumia aho, ary tokony holazaiko fa tsotra sy mora ampiasaina ilay lumia, na dia manana niches maharikoriko izy, toy ny fampiharana ho an'ny forum, toy ny tapatalk, tsy miraharaha izany, ho an'ny finday mpampiasa windows mahazatra dia zavatra tsara sy mora ampiasaina amin'ny boaty ...
Mieritreritra aho fa hiala ny htc-ko fa tsy solosaina ratsy, na noho ny android ratsy kokoa noho ny windows phone, dia ny telefaona finday no manao izay ilaiko rehetra ary maharitra roa andro ny bateria ... ary amin'ny smartphone rehetra no misy ilay maharitra iray andro monja dia asa titanic io
[Nomeko tsiny fa noho ny famolavolana ny android, izay satria mampiasa milina virtoaly izy, dia mandany loharano betsaka]
Miombon-kevitra aminao aho .. Toa ny nahatonga ny Windows Mobile na ny OS-n'ny OS ho intuitive kokoa taorian'ny andiany 7 sy ny kinova farany teo!
Raha ny Android dia eo amin'ny làlana tsara izy io, afa-tsy ireo malware ao ambadiky ny fampiharana marobe!
Eny, manana HTC Desire miorim-paka amin'ny MIUI aho, tsy misongadina mandritra ny faharetany ny bateria, tsy dia mahatalanjona ihany koa ny fahombiazany, tiako ny fotoana valin'ny fitaovan'ny paoma miaraka amin'ny tanjona-c tsaratsara kokoa, ny fametrahana java ao anaty finday avo lenta dia baribariana .
Nijery ny API aho ary tsy tiako (efa zatra ny hatsaran'ny API toy ny Qt sy Python) aho, nanao ny hevitro niaraka tamiko (c ++ qt) fa ny SDK android kosa mipoaka. ny interface sy XML dia niara-niasa tamin'i Java, tsy re ato amiko izany.
"Baribariana ny fametrahana java amin'ny smartphone."
"Saingy ny SDK android dia fipoahan'ny interface ary XML dia niara-niasa tamin'i Java, tsia izay manako."
"Ny fametrahana java amin'ny finday avo lenta dia fandaitra ary XML dia niara-niasa tamin'i Java, tsia dia feo mahery avy amiko."
Tiako ny Android fa ny olana misy eo aminy dia ny fihinanana bateria foana. Efa nisy nanandrana ny kinova hafa amin'ny Android izay nanova ny Java ho Mono na fiteny hafa? Raha manana ianao dia lazao amiko hoe manao ahoana ianao? bateria, mifanentana amin'ireo fampiharana Google Play, sns. sns.
Ny fampiasana android android toy ny fampiasana telefaona olon-kafa satria tsy azonao atao ny mamafa ny rindranasa sasany, tsy afaka miditra amin'ny faritra sasany amin'ilay kapila ianao, ary tsy afaka manefy zavatra maro. Toa mahatsiravina amiko ny zava-misy amin'ny fametrahana tontolon'ny birao vaovao tanteraka izay miasa amin'ilay teo aloha mba hahafahana manova ny lokon'ny bara fampandrenesana ho fanampin'ny fizotrany hahazoana fidirana ho faka ary amin'ny farany dia izy ihany amin'ny alàlan'ny fampiharana tena voafetra. Raha ampiasaina amin'ny telefaona dia toa tsara nefa mahatsiravina toa ny SO. Ary ny fanavaozana ... azafady aza omena anarana akory
Raha vantany vao azonao ny foton'ny terminal (izay azo atao farafahakeliny 98% an'ny terminal amin'ny Android), ny fanovana izay tadiavinao dia ny fametrahana ROM tianao, raha mbola misy azy ireo ho an'ny terminal voalaza ( inona no azo antoka amin'ny ankamaroan'ny terminal, fa mety misy maningana).
Tena ilaina ve ny firaisan-kina? Rariny ve ny herin'ny KDE rehetra? Debian, tena minono ve?
Afa-tsy ny fanontaniana farany, izay fantatray fa marina sy mahomby ny valinteninao, miankina amin'ny mason'ilay mijery izany rehetra izany.
Raha ny momba ny Android ary raha toa ilay olona tsy miresaka INFORMATIC tsotra loatra dia ilay olona lazainy fa TENA MARINA, amin'ny fomba fijery rehetra.
Mazava ho azy, ho antsika ny zavatra toy ny iPhone na Windows Phone dia voafetra be ary mahatonga antsika hahatsapa ho claustrophobic fa kosa ny Android miaraka amin'ny heriny sy ny fahafaha-manaony dia mahatonga antsika hahatsapa ao an-trano.
Na izany aza, Android dia sehatra goavambe izay mihoatra lavitra noho ny fahafahan'ny olona mampiasa ivelan'ny computing, ka zavatra toa an'i iPhone na Windows Phone dia ampy ho azy ireo.
Omeko ohatra mazava be ianao.
Tamin'ny taona vaovao dia nisy namana iray izay mipetraka any Failandy tonga namangy ny fianakaviany. Miresaka izahay ary asehony ahy am-pifaliana ny finday novidiny vao haingana, Samsung Galaxy Note.
Mangataka ny fahazoan-dàlana aminy aho "hilalao" amin'ilay bibikely ary ilay lehilahy mahia dia manokatra ny masony afaka fotoana fohy ary amin'ny endrika tsy finoana tanteraka dia manontany ahy izy hoe: "Ary izany !!? Inona no nataonao tany, ahoana no nanaovanao izany!? »
Toy izao ny resaka nifanaovana:
Izaho: «Boludo, ampahan'ny findainao io, bah, amin'ilay malemy entiny»
Izy: «Inona!? Tsy mbola nahita an'izany aho. "
Manodinkodina ahy ianao. Io ny menio safidy ao anaty menio lehibe. »
"Tsy mbola niseho tamiko io."
«Azo antoka, satria tsy tsindrio ny bokotra mba hisehoany. Lazao amiko zavatra, inona no ampiasainao avy amin'ny Note, ampiasainao hiantsoana zavatra hafa!?
"Tsia, eny eny, mazava ho azy fa hiantsoana, handefa hafatra ary avy eo ampiasao ny Internet sy ny zavatra hafa ananako eo amin'ny efijery."
(Fanazavana: "ny zavatra hafa" dia ireo widgets sy symlinks amin'ireo rindranasa izay tonga amin'ny toerana misy anao amin'ny efijery lehibe).
Rehefa avy niresaka kelikely izy dia tsapan'ilay lehilahy mahia fa tsy fantany ny tanjaky ny finday avo lenta, ny zavatra rehetra azony atao, ny amin'ireo menus sy efijery marobe, ny fomba fitantanana ny rindranasa sns.
Notsoriko fa 28 taona ilay lehilahy mahia ary tsy adala akory izy fa ho azy fotsiny ny solosaina sy ny fitaovana hafa fa tsy ny farany akory, ka mihoatra ny fampiasana an'izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra ankehitriny tsy mahalala betsaka momba ny siansa amin'ny informatika satria manafoana azy tsotra izao ary tsy miraharaha izy.
Ka sarotra ve ny Android? Azo antoka fa ho an'ireo izay tsy manana fahalalana taloha.
Mahasoa ho an'ny mpampiasa farany ve izy io? Tsia, tsia.
Noho izany dia mila mametra ny rindrambaiko ianao ary mametra azy io arakaraka ny sokajy kendrenao: TSY MAINTSY.
Microsoft sy Apple dia mampiasa ireto antony ireto hanohanana ny fameperana ampiharin'izy ireo amin'ny vokatra vokariny - ary izany no antony itrangan'izy ireo ho antsika izay mahalala bebe kokoa momba an'io lohahevitra io.
Android dia biby goavambe goavambe mamela antsika hanao izay tadiavintsika miaraka aminy, ny olana dia tsy mpivarotra finday avo lenta - na mety - mety amin'ny famolavolana ny interface-ny mpampiasa - miova tsikelikely izany.
Vokatr'izany dia azo atao ny mamorona traikefa mpampiasa tsotra sy matanjaka ho an'ny mpampiasa end-END nefa tsy mametra azy amin'ny fampiasana ilay fitaovana ary mamela varavarana misokatra foana hahafahany mahita ny tena herin'ny fitaovany isaky ny maniry izy.
Tsarovy ihany koa: ny mpanamboatra finday avo lenta dia tsy macanuda indrindra, olona mahafinaritra izay mitady hamorona tontolo tsaratsara kokoa, Android ihany no ampiasainy satria io ilay rindrambaiko maimaim-poana misy an'izy ireo.
Mifanohitra amin'ny tenanao ianao, satria maimbo ny masonao no hitan'i Debian fa tsy ny ahy ohatra. Te hahita fahitana kely ihany koa aho amin'io fanehoan-kevitra io. 😉
Izaho mbola tia simbiana e! Ampy ho ahy izany ary nanana ny ampy aho ka ny marina, mba hihainoana mozika, hivezivezy amin'ny mini opera ary hanao antso dia tsy mila bebe kokoa ny olona.
Ah, tsara ny nieritreretako fa hatsikana manesoeso madio io resaka io ary afaka mampiasa an'i Debian xD aza aho
spyker1925 dia hoy izy:
Diso ianao araka ny nolazain'i Elav momba an'i Debian, fomba fijerinao izany. Tsy hevitra velarana sy marina velively izany.
Valiny amin'ny spyker1925
Efa fantatro fa hisy hanarato.
Voafitaka ianareo ry zalahy 😀
Lol, lasa izy ireo noho ny resaka troll ary tsy niraharaha ny zava-drehetra
Nanazava aho fa tsy niraharaha ny tsy fahaizanao mamantatra tanteraka an'i Debian, nifoka sigara aho ary namaky hatrany mandra-pahatongako amin'ilay faritra ilazanao fa milalao ny bibin'ny namanao ianao. Mihevitra aho fa tokony hajanona ireo toe-javatra akaiky.
Mitehafa tehaka, hevitra mahafinaritra 😀
hahaha ary inona no holazain'ireto olona ireto…. sarotiny ?? ny zanako lahy vao 5 taona dia mitantana an'io araka ny sitrapony ... mahay mametraka lalao sy ny zavatra rehetra aza izy, raha heverin'ity bandy ity fa sarotra izany ... ny volavolan-dalàna dia mila mahita tsara hoe iza no karamainy 🙂
Heveriko fa ENY, Android dia sarotra ampiasaina kokoa noho ny Windows Phone sy iOS, saingy tsy dia ratsy loatra.
Ao amin'ny ios dia manana menio tokana ianao ahafahanao miditra amin'ny zava-drehetra na dia hamafana ny rindranasa aza. Ao amin'ny Windows Phone dia manana menio tsy misy hadalana kely ihany koa ianao ahafahanao manokatra rindranasa.
Amin'ny Android dia tsy mitovy izy io, satria alohan'ny hidirana amin'ny menio lehibe dia tsy maintsy mamaky ny birao ianao, indraindray mahasadaikatra izany ho an'ireo mpampiasa vao misimisy, na dia be dia be aza ny widget manafangaro azy koa. Mba hamafana ny rindranasa dia tsy maintsy mitady ny safidy ao anaty fikirana ianao, misavoritaka ny fikirakirana ny galerin'ireo sary ary indraindray dia ilaina ny mamakivaky ilay mpikaroka rakitra hahitanao izay ao anatiny. Mpilalao horonantsary / horonan-tsary sasany rehefa manokatra rakitra dia mampiseho aminao ny lahatahiry rehetra ao amin'ny OS mba hahafahanao misafidy ny toerana misy ilay rakitra tianao hosokafana, izay manahirana ihany koa ho an'ny mpampiasa vao manomboka satria tsy ho fantatr'izy ireo hoe aiza ilay izy. apetaho ny karatra SD.
Marina Android mety ho sarotra kokoa (tsy ratsy koa), izay mahatonga azy io ho azo ovaina kokoa, saingy io no rafitra tiako indrindra amin'ny telefaona finday.
nuanced dia hoy izy:
Ahoana no maharary an'i Microsoft. tpt
Mamaly an'i matizak
Sarotra? Toa tsy nahalala an'i symbian izy (ny mora indrindra tamin'ny andron'ny android taloha) izay tsy maintsy nandehanany nitady / nijirika rindranasa tany, ary ny hevitry ny tsena dia tao amin'ny gnu + linux distros ihany. Namaha an'ity i Android, mamela anao hametraka rindranasa miaraka amina fikitihana iray, nefa tsy mandeha amin'ny tariby data, cd ary suite pc toy ny teo aloha. Tsy mamela ny mpampiasa tsy manana tombontsoa hijery na hanova ny fampirimana rafitra, toa ny OS * nix rehetra (ary talohan'ny naharatsy azy tamin'ny OS finday hafa). Inona no niandry ilay lehilahy, raha mampiditra SD isika ary miaraka amin'ny autorun dia mamindra ny rafitra iray manontolo isika? tsy eo amin'ny windows xp izahay
Manaiky tanteraka anao msx.
Mino manokana aho fa tsy hoe sarotra ity na ilay fitaovana na ny mpampiasa tsy manana fahalalana mandroso momba ny informatika dia tsy afaka manararaotra feno an'io fitaovana io, fampahalalana tsotra io, na avy amin'ny mpanamboatra ka hatrany amin'ny mpaninjara ary avy amin'izany ho an'ny mpampiasa. famaranana ... saingy tsy miresaka an'io fampahalalana voatonta ao amin'ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa miaraka amin'ny fitaovana io aho, fa amin'ny fifandraisana. Ohatra, eto Japon na ny ankizy na ny lehibe (ao anatin'izany ny be antitra), dia mampiasa ny fitaovany miaraka amin'ny fahalalana feno ny ankamaroan'ny asany sy ny safidiny, saingy izany dia vokatry ny fampahalalana natolotra tao amin'ireo toeram-pivarotana; Rehefa mankany amin'ny iray amin'ireo orinasa ireo ianao hividy Smartphone (na inona na inona OS ampidiriny), dia mahita fampisehoana ireo safidy manintona indrindra amin'ilay fitaovana voalaza ianao ary manasa anao hahita ny ambiny ho anao, ho fanampin'izany dia misy foana tompon'andraikitra amin'ny fanazavana aminao amin'ny an-tsipiriany izay rehetra tianao ho fantatra sy izay tsy momba ny fividiananao vaovao (ary fantatr'izy ireo fa mihoatra ny 85% ny mpanjifa tsy mamaky ireo takelaka misy fanazavana miaraka amin'ny fitaovana).
Ny antsipiriany mahaliana dia ny Japoney tsy dia tia Android loatra rehefa mipoitra izy ireo, hitako fa mividy ireo fitaovana misy an'ity OS ity tarihan'ny dokam-barotra faobe izy ireo nefa herinandro dia naverin'izy ireo izany na alainy any amin'ny toerana fanodinana.
LU7HQW dia hoy izy:
Marina izany, ho an'ireo mpampiasa vao tsy te hivezivezy, milalao, mahita ny toetr'andro hijoroany na amin'ny tanàna an'arivony kilometatra miala eo (izay ny marina dia tsy fantatro mihitsy ny antony anaovan'izy ireo izany, satria ampy ny mijery eny an-danitra hahalala ny toetr'andro, na hoe tsy ho afaka mankafy ny hafanan'ny Karaiba ianao satria 5000 km ...) ary ny gilada rehetra an'ny Facebutt, twister, wasaaaaappp, ary ireo zavatra ireo, tsotra sy interface tsara dia ampy. Fa toy ny manana Bugatti Veyron izany ary tsy mihoatra ny 60 km / ora !!!
Mandoa vola be toy izany ho an'ny smartphone tsy mampino, mba hanaovana giladas fotsiny, tsy hitako izay antony.
Tiako ny Android, satria mamela ahy hanova azy io araka ny sitra-pony ny sehatra, manova ny rindrambaiko araka izay itiavako azy ary mampifanaraka azy amin'izay ilaiko. Inona koa, tsy mila kahie ho an'ny asako intsony aho, avy amin'ny Defy + vitako izay tiako atao.
Na izany na tsy izany, hoy i Don Gaara, sarotra ny Android. Fa ao anatiny, izay tian'ireo mpampiasa mandroso mametraka ny tanany.
Valio amin'i LU7HQW
Tsy sarotra mihitsy ny Android-ko ... Ary efa ho roa taona no nampiasako azy. Angamba satria manana safidy betsaka noho ny WP7 / 8, iOS, BBOS ary ny hafa izy, fa amin'ny ankapobeny tsy mbola hitako izay olona fantatro hitaraina fa sarotra izany. Iray angamba raha be indrindra.
Ny tiako amin'ny rindrambaiko maimaimpoana dia ny fiarahamonina, satria ny ampahany amin'ny fahitana ilay kaody dia tsy misy fiatraikany amiko satria tsy haiko ny mamolavola programa 😛
Tsy misy fiantraikany aminao mivantana ny mahita ilay kaody fa tsy ankolaka, noho io, lasa milamina kokoa ny rafitra isan'andro, noho io fantatsika io fa tsy manao zavatra hafahafa eto ambanin'ny tany ilay rindrambaiko, noho io misy betsaka kokoa ary fizarana bebe kokoa mifanaraka amin'ny filan'ny olona, ​​arakaraka ny maha-tsara kokoa azy, samy manana ny filany avy izy rehetra, noho ny fandrosoana vita amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa madio sy ny fifanohanana ary tsy nasiana soatoavina ara-barotra be loatra.
Tongasoa eto amin'ny birao semantis. Fizarana 3: mampihetsika KDE